निवर्तमान (Nibartaman) ||: ‘...खै के लेख्ने ?’
‘...खै के लेख्ने ?’
शनिबार त्यसै पनि विदाको दिन भएको हुनाले अलि फुर्सदको दिन मानिन्छ । शायद त्यसो भएरै होला शनिबार अरु दिनको तुलनामा अलि बढ्ता अल्छि पनि भईंदोरहेछ । त्यसो त पत्रिकामा काम गर्ने हामीहरुलाई त के को शनिबार, के को आइतबार, सधैं उस्तै । तैपनि अन्य दिनको तुलनामा शनिबार अलि होलो त हुन्छ नै । अनि शनिबारको रुटिन पनि अलि अल्छी पारकै बन्ने गरेको छ । तर, मेरो हकमा भने शनिबार अलि फरक हुन्छ । सोमबारे स्तम्भ ‘समायान्तर’को लागि शनिबार केही न केही कोर्नै पर्ने हुन्छ । शनिबार फुत्कियो भने लेख्ने समय व्यवस्थापन गर्न अलि कठिन पर्छ । नत्र सामान्य रुपमा केही दिन अघिदेखि नै विषयवस्तुको चयन हुन्छ । तर, यसपटक भने पूराका पूरा खाली भइयो । फेरि यो स्तम्भ लेखन पनि कहिले काहीँ त झन्झटिलो पनि हुने रहेछ । विषयवस्तु पनि नफुर्ने र फुरिहाले पनि कति लेख्ने ? भन्ने पनि पर्ने रहेछ । आज शनिबार मलाई त्यस्तै भयो ।
केही दिनदेखिको कार्य व्यस्तताले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि मसिनो तरिकाले नियाल्न नपाएको र फेरि जहिल्यै पनि त्यही असन्तुष्टिको कुरा मात्रै कति गर्ने ? कति लेख्ने ? भनेर यसपटकको समयान्तरबाट विदा लिने पो हो कि भनेर सोच्दै थिएँ । त्यत्तिकैमा फेसबुक एकाउन्टमा स्टाटस ठोकिदिए“, – ‘लेख्नुपर्ने तर विषयवस्तु नै फुरेन......खै के लेख्ने हो ?’ स्टाटस पोष्ट हुन नपाउ“दै एउटा अत्यन्तै चिरपरिचित एवं सम्मानित एकाउन्टबाट सुझाव आइहाल्यो कि त्यो स्टाटस नै आफैंमा लेख्ने विषय बन्नसक्छ । अरे मेरो त्यसतर्फ त ध्यान भएकै रहेनछ । अग्रज लेखक गुरुदत्त ज्ञवालीले त्यही कुरा लेखेर मेरो चुनावी चक्करले रन्किएको मुलुकको राजनीति जस्तै अन्यौलग्रस्त बनेको मस्तिष्कलाई स्ट्राइक गरिहाल्यो ।
सोचें यसैलाई शीर्षक किन नबनाउ“ । र म शीर्षकको गहिराई तर्फ आकर्षित भए“ र आजको यस समयान्तरमा त्यही ‘के लेख्ने’ भन्ने विषयलाई नै चिरफार गर्ने निश्चय गरेर हातका औंलाहरु कम्प्यूटरको किबोर्डमा नचाए“ । वास्तवमा के लेख्ने भन्ने विषय नै यति ठूलो रहेछ कि त्यसमा धेरै कुरा अटाउने रहेछ । मैले फ्यास्स स्टाटस त लेखिदिए“ । तर, म आफैं पनि त्यसको गहिराईमा पुग्न सकेको रहेनछु । आखिर किन लेखिन्छ ? के लेखिन्छ ? भन्ने कुरा पनि त लेखनको विषयवस्तु नै हो नि । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो केही नौलो प्रायोग गर्दै गरेको, केही सिक्दै गरेको, केही परिवर्तन हुँदै गरेको, केही अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको संक्रमणकालमा ।
त्यसो त संक्रमणकाल यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा संभावनाहरु पनि चुलिएका हुन्छन् र चुनौतिहरु पनि अजङ्गले तेर्सिएका हुन्छन् । अनि त्यही संभावनाको फुर्को समातेर चुनौतिका पहाड चढिरहेका हाम्रा लागि हरेक विषयवस्तुहरु अवसर र चुनौति हुन् । अनि यस्तो अवसर र चुनौतिको महासंग्राममा लेख्ने, पढ्ने, बुझ्ने विषयवस्तु त झन् बग्रेल्ती हुने नै भए । यस्तो अवसरै अवसर हु“दा पनि मैले लेख्ने विषयवस्तु फेला नपारेको देख्दा मैले आफ्नै ज्ञानचक्षुलाई हकारेँ । अनि मेरो ज्ञानचक्षुले किन यी बग्रेल्ती विषयवस्तुहरुलाई देखेन, स्पर्श गर्न सकेन भनेर ठुस्सिंदै, आफैंलाई प्रश्न गर्दै यो आलेख तयार पारेँ ।
एउटा युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ अग्रसर भएको मुलुकमा लेख्ने, पढ्ने अनि बुझ्ने विषयवस्तुहरु अनगिन्ती छन् । तर हामीले त्यसलाई गम्भीर तरिकाले अझै बुझेकै रहेनछौं । त्यसो त यो मुलुकमा कुनै अवसर नै छैन भनेर दैनिक पन्ध्र सय भन्दा बढी होनाहार नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा रगत, पसिना बिक्री गर्न गइरहेका छन् । र, प्रतिफलको रुपमा आफैंलाई काठको बाकसमा पोको पारी दैनिक २÷४ को संख्यामा फर्किरहेका छन् । मेरो माथिको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै रोजगारीका लागि कतारमा गएका एकजना मित्रले ‘कतारको बारेमा लेखौं न’ भनेर सुझाएका थिए । शायद उनले मैले लेख्ने विषय नपाएको तर विदेशी भूमिमा नेपालीहरुले पाएको दुःख, कष्ट, पीडा र दर्द नदेख्ने भन्दै मलाई नै कटाक्ष हानेका हुन् झैं लाग्यो । अनि मैले आफैंलाई नियाल्ने चेष्टा पनि गरें ।
आखिर लेखिनै रहिएको छ । खै हामीले निरन्तर लेखेर के भयो ? हामीले कहिल्यै त्यता ध्यान दिएनौं । हामीले लेख्न त लेख्यौं । तर त्यसले समाजको रुपान्तरणका लागि सहयोग ग¥यो कि गरेन ? हामीले लेखेका कुराहरु कत्तिको स्थापित भए वा भएनन् ? त्यतातिर कहिल्यै ध्यान दिएनौं । हामीले केवल आफ्नै लागि लेख्यौं वा समाज, देश र जनताका लागि ? अहिले मलाई हामी लेखकहरुले यो प्रश्नलाई गम्भीर भएर सोच्ने बेला पनि आएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।
राजनीतिको कुरा लेख्यो धेरैले बारम्बार सोध्ने एउटै प्रश्नले दिमाग रिंग्याउ“छ, ‘के सा“च्चिकै चुनाव हुन्छ त ?’ आर्थिक कुरा लेख्न खोज्यो, एउटै कुरा आउ“छ, –‘यो देश बनाउने कसैको भिजन नै छैन’ । अरे भाइ ! त्यो भन्नेले नै सबै धानिदिए जस्तो । युवाहरुको कुरा ग¥यो, एउटै उत्तर आउ“छ, –‘देशमा अवसर नै छैन’ । राज्य संयन्त्र हे¥यो, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । शिक्षाको कुरा ग¥यो, ‘व्यवहारिक नै छैन’ । अखबारको कुरा ग¥यो सबैभन्दा बढी ‘नकारात्मक सामग्री’ नै बढी बिकाउ हुन्छ । त्यही घरेलु हिंसा, बलात्कारका समाचारहरुले पाना भरिएका छन् । शायद हामीले आफ्ना रचनाहरुमा विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनौं र विस्तारै समाज नै विकल्पबिहीन झैं बन्न पुग्यो । जब विषवस्तुको गहिराई नाप्न सकिन्न, तब कुनै विकल्प सुझाउन सकिँदैन । हामीले पनि विगतमा शायद त्यसै ग¥यौं, समाजलाई उपयोगी हुने मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई सहि गन्तब्यमा पु¥याउने विकल्पहरु दिन सकेनौं त्यसैले अहिले विषयवस्तुको खडेरीको महशुस भएको छ । समाजले, राष्ट्रले रचनात्मकता गुमाउ“दै गएको छ । हामीमा नकारात्मक प्रवृत्ति नै हावी भएको छ ।
केही दिन अघिको कुरा हो । यसै अखबारद्वारा प्रगतिशील लेखक संघ, रुपन्देहीको छैटौं जिल्ला सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मैले पछिल्लो समयमा मिडियामा आएका लेख रचनाको प्रकृति प्रवृत्तिको बारेमा छोटो चर्चा गरेको थिए“, कि अहिले आएका समष्टिगत आलेख, तथा विचारहरुलाई हेर्दा तिनलाई दुईवटा श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । तिनीहरु कि त असाध्यै सतहि भएर आएका हुन्छन् कि त सिद्धान्त र दर्शनको नाउ“मा असाध्यै क्लिष्ट हुन्छन् । पहिलो प्रकारको आलेख तथा विचारले खासमा सतही ज्ञान दिन्छ । व्यक्तिलाई कुनै चीज र घटनाको सहज धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्छ र तर त्यसले समस्याको पहिचान गरी त्यसको दिर्घकालीन समाधानको उपाय सुझाउ“दैन । त्यसमा बजारमा चलेका हल्ला र छिटो बिकाउ हुने सामग्रीहरु नै बढी हुन्छन् । अन्तत्वगत्वा त्यस प्रकारका विचारले सतहमै रमाउने माहौलमात्र सिर्जना गर्छ किन्तु कुनै चिज र घटनाको गहिराईमा गएर त्यसको अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्न सक्तैन ।
त्यसैगरी अर्कोथरी आलेख, रचना वा विचारले भने सम्पूर्ण चिज र घटनालाई ‘सिद्धान्तको पोथ्रा’मा लगेर टुंग्याइदिन्छ । यहा“नेर कमरेड मदन भण्डारीको शब्द सापटी लिंदा त्यस किसिमका विचारहरुले केवल ‘सिद्धान्तका लागि जीवन’ बनाइदिन्छ । वास्तवमा सिद्धान्त त जीवनका लागि हुनुपर्ने हो । तर, त्यस किसिमको विचारले ‘सिद्धान्तका लागि जीवन’को मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको हुन्छ । यसरी यी दुई प्रकारका विचार र दृष्टिकोणको बीचबाट दाया“बाया“ गर्दै हिंड्नु नै ‘जीवनका लागि सिद्धान्त’को आदर्श हो । तर, लेखकहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । हामीले कि त आफ्नै आग्रह लेख्यौं कि पूर्वाग्रही भावनाले ओतप्रोत भएरै लेख्यौं । कहिल्यै समाज, पात्र र प्रवृत्तिको वस्तुनिष्ठ समीक्षक भएर लेखेनौं । शायद त्यसैले समाज नकारात्मकतातिर गयो ।
लेख्ने सवालमा विषयवस्तुहरु बग्रेल्ती छन् । यद्यपि अहिलेको संक्रमणकाल र परिवर्तनको संघारमा उभिएका हमीहरुलाई छुने विषय अर्थराजनीति, सामाजिक रुपान्तरण, हकअधिकारका कुरा नै हुन् । यी विषयमा धेरैले धेरै कलम चलाईसकेका छन् र अझै चलाउनेछन् । तर, किन दैनिक लेखिन लाखौं शब्दहरुले कसैलाई छोएको छैन ? किन दैनिक रुपमा सृजना हुने लाखौं विचारहरुले कुनै निकास दिन सकेको छैन ? के हामी सबैले गलत विचार प्रवाह गरेरै त्यस्तो भएको त होइन ? अथवा हामीले गहिराईमा गएर लेख्नै सकेनौं ? अथवा हाम्रो विचार र बोलीको कुनै प्रवाह छैन ? कुनै अर्थ छैन ? त्यसो भए हामी किन मथिङ्गल खियाएर लेखिरहेका छौं ? किन कपाल दुखाइरहेका छौं ? खासमा हामी लेखक वा बुद्धिजीवी जो भन्छौं, समाजको लागि, देशका लागि हाम्रो भूमिका के हुने यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । तबमात्र हामीले केही योगदान दिएको ठहर्छ । हामी आफ्नो भूमिकामा नै स्पष्ट भएनौं भने हामीले दिएका खुराकहरु केवल सतही बन्न पुग्दछन् ।
हो, अब हामीले वस्तुनिष्ठ भएर लेख्ने बेला आएको छ । हामीले अब सिद्धान्त दर्शनका नाउ“मा जीवन अर्पण गर्ने खालका सामग्री पस्किने होइन सिद्धान्तहरुलाई जीवनपयोगी बनाउने सरल ‘टिप्स’ दिन सक्नुपर्छ । लेखकले कुनै कुरा, मुद्दा वा विषयवस्तुको उठान गर्दा त्यसलाई सरल बनाउने हो झन् भन्दा झन् जटिल होइन । विषयवस्तुहरुको सरलीकरणमै त आकर्षण पनि हुन्छ । त्यसो भए समाजलाई उपयोगी हुने व्यवहारिक प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुप¥यो ।
लौ त, यसपालीको समयान्तरमा यस्तै कुरा लेखियो । समयान्तरका लागि लेख्ने विषयवस्तु सुझाउनुहुने अग्रज गुरुदत्त ज्ञवालीलाई साधुवाद ! आगे अर्को पटक ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily 2070.06.14
at October 01, 2013
कस्तो विकास, कस्तो अर्थतन्त्र
मनिकर कार्की निवर्तमान सामान्य अर्थमा अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै विकास हो।...
बहसमा वैकल्पिक राजनीति - ३ ‘वैकल्पिक शक्ति’का विकल्पहरू
मनिकर कार्की निवर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य बदलिएको निष्कर्षसह...
'राजनीतिलाई सुधार्न' भन्दै चुनावमा उत्रिएका रुपन्देहीका युवा उम्मेदवार
एक वर्षअघि बुटवलको एक लघुवित्तमा सिइओको जागिर गर्दै थिए मनिकर कार्की। रामेछापको मन्थलीमा जन्मिएर अध्ययनको शिलशिलामा काठमाडौं पसेका उनी अ...
१८ घन्टे ट्याङ्कर यात्रा अनुभूति मनिकर कार्की निवर्तमान काठमाडौंको जाम छिचोल्दै काँडाघारीबाट कलंकीसम्म आइपुग्न दुई घन्टा लाग्यो । ...
रामेछापमा जन्मिएका लेखक विगत एक दसकदेखि निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् । लेखक विशेषतः देशको समसामयिक अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । अध्ययन र भ्रमणमा विशेष रुचि राख्ने उनी समाजका भुईंतहका कुरा आफ्ना आलेखहरुमा उठाउँछन् । पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिकको अभियानमा संलग्न लेखकका लेख रचनाहरु विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइनहरुमा निरन्तर प्रकाशित भइरहेका छन् । लेखकको वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामको पुस्तक प्रकाशित छ ।
देश दर्शन, हेटौंडा २०७०
चुनाव भर्सेस दसैं
विकास बहसको डिस्कोर्स
MANIKAR KARKI NIBARTAMAN
© Manikar Karki Nibartaman. Picture Window theme. Powered by Blogger.